I-gastronomy yaseMexico | Iindaba Zokuhamba
Maria | | IGastronomy, Mekhsikho
Umfanekiso | Isikolo sabaphathi beenkcubeko kunye nee-animators
Xa kufikwa ekutyeni, abantu baseMexico banelizwi elithi "isisu esigcweleyo, intliziyo eyonwabileyo." Ayinamsebenzi ukuba sisitya kwindawo yokutyela etofotofo, kwindawo emi kuyo i-taco ekoneni okanye kwindlu yomhlobo, nokuba ikuphi kwaye ikho, amaMexico ayakwazi ukonwabela ukutya okumnandi kwesintu. Ngapha koko, imnandi kakhulu kwaye iyaxatyiswa kwihlabathi liphela kangangokuba ngo-Novemba ka-2010 yamkelwa yi-UNESCO njengeLifa leMveli loLuntu. Kwaye yintoni eyenza ukuba i-gastronomy yaseMexico ikhetheke kangaka? Ewe, oko kuchukumisa okwahlukileyo kwizitya. "Iziqholo" okanye "iziqholo" ezinokuthiwa ngabantu baseMexico.
Okulandelayo, sijonga ezona zilungileyo ze-gastronomy yaseMexico kwaye sijonga kwiikhikhini zaso.
1 Imvelaphi yokutya kwaseMexico
2 Iimpawu zokutya kwaseMexico
3 Chili, iimbotyi kunye nombona
4 Izitya eziqhelekileyo zaseMexico
4.4 Ikhekhe elimanziweyo
4.7 Iibhlowu zamandongomane
5 Iziselo eziqhelekileyo eMexico
5.3 Amanzi amatsha
Imvelaphi yokutya kwaseMexico
Yenye yezona zinto zindala ukusukela oko yaqala ukubuyela emva kwiminyaka eyi-10.000 XNUMX, ngexesha apho ingqolowa yaqala ukulinywa ukuyenza isiseko sokutya sabantu baseMesoamerican. Uluntu lwemveli oluhlala kulo mmandla lwalunemifuno, itshili kunye nombona njengokutya kwabo okuphambili, nangona oku kutya kwakudityaniswa nabanye kungabalulekanga kangako njengetumato, iavokhado, icactus, ithanga, icocoa okanye ivanilla.
Kumsitho wokubhaqwa kweMelika, izithako ezitsha zongezwa kwizidlo zaseMexico ezinje ngeminqathe, isipinatshi, irayisi, ingqolowa, ihabile, i-ertyisi okanye iintlobo ezahlukeneyo zenyama evela kwizilwanyana ezivela eYurophu ezifana nengulube.
Olo fusion lwadala esinye sezona ndawo zityebileyo emhlabeni esasaze ifuthe lazo kwiindawo ezininzi zehlabathi. Namhlanje ukutya kwaseMexico kusisizathu sokuhamba kwabakhenkethi kukhenketho lwe-gastronomic. Abaninzi abahambahambayo baya eMexico ukuze bazi i-pozole eyiyo, i-cochinita pibil, i-mole poblano, i-enchiladas, i-chiles ezifakiwe, umntwana okanye isonka se-dogfish.
Iimpawu zokutya kwaseMexico
Iindidi zezitya yenye yeempawu ezibalulekileyo zokutya kwaseMexico. Ngokuqhelekileyo ilizwe ngalinye linamasiko kunye neendlela zokupheka, kodwa eyona nto ixhaphakileyo ziimbotyi, umbona, isilili kunye neetumato.
Olunye uphawu lwe-gastronomy yaseMexico kukuba abenzi mahluko phakathi kwecuisine yemihla ngemihla kunye ne-haute cuisine.
Kukho izitya zemibhiyozo ezinje ngee-tamales, i-mole okanye i-tacos ezinokuthi zisetyenziswe nangaluphi na usuku lonyaka.
I-cuisine yaseMexico sisiphumo sokuzala kwenkcubeko kwaye kuyo unokuqonda umbono amaMexico anawo ehlabathi.
Chili, iimbotyi kunye nombona
Iipilisi zepelepele ziyinxalenye yokutya kwaseMexico kwemihla ngemihla, okwenza ukuba ibe yindawo yokudlalela abantu bamanye amazwe, ngenxa yokuba bayothuswa ziindidi zeesosi kunye nokwahluka okwahlukileyo oku kunikwa sisitya.
Ngokuphathelene neembotyi, kwizizukulwana ziye zasetyenziswa njengehombo kwisidlo ngasinye. Kodwa owona mboniso mkhulu we-gastronomy yaseMexico, ngaphandle kwamathandabuzo, ngumbona kwiinguqulelo zawo ezahlukeneyo: ii-enchiladas, i-chilaquiles, ii-tacos ... ngaphandle koku kutya akukho nto iya kufana nokutya kwaseMexico.
Izitya eziqhelekileyo zaseMexico
I-barbecue eyi-mexican eyiyo, ii-carnitas kunye neetacos zenkukhu
Sesona sidlo simeleyo se-gastronomy yaseMexico. Isekwe kwi-tortilla yengqolowa apho kugalelwa khona ukuzaliswa okufana nenyama, iisosi, iilokhwe, njl. Zihlala ziphakwa zisongwe kumacwecwe acabaleleyo kunye nokulungiswa kwazo kuya kuxhomekeka kwingingqi yelizwe.
Esi sisitya esiqholiweyo esenziwe ngeetshiphusi ze-tortilla ezifakwe isosi yesosi kwaye zidityaniswe netswele, itshizi, i-chorizo ​​okanye inkukhu, phakathi kwabanye. IiChilaquiles zihlala zizakusasa abantu abaninzi baseMexico.
Luhlobo lwesuphu eyenziwe ngembewu yeenkozo ekufakwa kuyo inyama yehagu okanye yenkukhu. Izithako ezinazo i-pozole ziya kuxhomekeka kakhulu kwingingqi ephekwe kuyo kwaye inokubandakanya iletisi, itswele, ikhaphetshu, itshizi, iavokhado, isilili, ioregano, njl. Esi sidlo sinikwa kwisitya.
Esi sisitya esiqhelekileyo saseJalisco kwaye sithathwa njengesandla sangcwele ukulwa iihangovers. Isiseko seqebengwana elirhawulisiweyo yi-birote (iqweqwe, igolide kunye nesonka esibhakiweyo) esigcwele inyama kwaye sisasazeka kwisosi eshushu eshushu. Isosi yetomato, igalikhi, ikumin, itswele okanye iviniga nazo ziyongezwa.
Ekuqaleni kwii-convents ze-viceroyalty e-Zamora (Hidalgo, Michoacán), ii-chongos zizinto ezilula kodwa ezimnandi ezenziwe nge-sinamon, ubisi olugobileyo kunye noshukela.
Ngaphambili, le dessert yesiqhelo yaseMexico yayiyinxalenye yokutya kwemveli kwaye yayisetyenziswa njengedessert yomnyhadala kunye nokutshintshiselana. Yenziwe ngembewu ye-amaranth, ierasentyisi kunye nobusi.
Zikwindawo yokutya yaseMexico kwaye zilungiselelwe iswekile, amandongomane aqingqiweyo, amanzi, imajarini kunye neoyile yemifuno.
Iziselo eziqhelekileyo eMexico
I-Tequila, isiselo esisisigxina eMexico
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwinkcubeko yaseMexico sisisu sayo kunye nakwilizwe elibanzi loburhabaxa, imibala kunye neencasa, iziselo zazo ezimnandi. Kukho iziselo ezinxilisayo, eziswiti, ezihlaziyayo, eziqholiweyo kwaye ngaphandle kwencindi yotywala. Ekugqibeleni, olu hlobo lukhulu kakhulu njengelizwe ngokwalo.
Sesona siselo sidumileyo kwihlabathi liphela eMexico kwaye siye sangomnye woonozakuzaku benkcubeko yaseMexico.
Iqale ukuveliswa embindini wenkulungwane yeshumi elinesixhenxe kwaye inkqubo yayo yokuvelisa inomdla njengokunambitheka kwayo. I-Tequila ifunyanwa ekubiliseni kunye negwele kunye ne-distillation ye-juices ye-agave eluhlaza, ethi kamva ifakwe kwimigqomo yeplanga.
Okwangoku kukho malunga ne-160 brand kunye neefama ezili-12 eziyivelisayo, enika ubomi kwenye yezona mveliso zifunwayo zaseMexico phesheya. Yeyiphi enegama elidumileyo lelebheli yemvelaphi. Ukongeza, indawo egave yaseJalisco yabhengezwa njengeNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi kwaye ngenxa yale ndlela iTequila yaphakanyiswa kwiindawo ezahlukeneyo eziyivelisayo.Ezineemyuziyam kwimbali yesi siselo, ukuvela kwayo kunye nemveliso.
IMichelada yindlela yaseMexico yokonwabela ibhiya ebandayo enomkhenkce ngentwana yetyuwa, itabasco, ilamuni kunye nezinye izithako ezidibanisa incasa emnandi. KwiLatin America, imichelada sisiselo esidume kakhulu kwaye ihlala ilungiswa ngebhiya yalapha.
Ukuhamba | Ukubuyela umva kwenkcubeko
Imozulu eshushu kweminye imimandla yelizwe yenze amanzi amnandi ukuba zezona ziselo zingafunekiyo. Zenziwe ngembewu yeziqhamo kunye noshukela ukwenza iswekile. Ezona zidumileyo zezi zilungiselelwe ukusuka kwi-chia, hibiscus, tamarind kunye horchata.
Ngelixa i-chia iyimbewu yemveli, ezinye iziqhamo zivela kwezinye iindawo zehlabathi ezifana ne-Afrika, i-India ne-Spain. Nangona kunjalo, indlela yokulungiselela kunye nokuhambisa la manzi amatsha (kwiiglasi ezinkulu) yinto eqhelekileyo nesiko eMexico.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » IGastronomy » I-gastronomy yaseMexico